MSME Books (up to 30% promotion) - Business Centric Network (BCN)
MSME Books (up to 30% promotion)
January 29, 2019 January 29, 2019 San Thida
MSME Books ဆိုတာ ☁️ ??Cloud Based Accounting Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့?? ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရှင်းတမ်းတွေကို လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှူ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MSME Books မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာများကတော့
?ကုန်ပစ္စည်း အဝင်၊အထွက်နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
?ငွေသား အဝင်၊အထွက်နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
☁️ ??Cloud Based Accounting Software ဖြစ်သည့် အတွက် ⏱အချိန်၊✈️နေရာမရွေးကြည့်နိုင်ခြင်း၊?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? သုံးစွဲသူဦးရေကန့်သတ်မထားခြင်း၊? ? ?ဆိုင်ခွဲများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ? ? ?ဆိုင်အလိုက် ❓ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်အရေအတွက် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
?အတိုင်းအတာ၊အချိန်အတွယ်မတူသော(Multi UOM၊ယူနစ်အမျိုးမျိုး) ပစ္စည်းများအားလည်း ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် ယူနစ်တစ်မျိုး၊ရောင်းသည့်အချိန်တွင် ယူနစ်တစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
?ငွေကြေးစနစ်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အကြွေးရောင်းချသည့် အချိန်တွင်လည်း ?ငွေကောက်ခံရမည့်ရက်ကို စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သင်ဘယ်နေရာကို ရောက်ရောက် လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေကို စာရင်းကိုင်ဆီက အစီရင်ခံစာ စောင့်စရာမလိုပဲ၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ကြည့်နိုင်တာမို့ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
အသုံးပြုခ ???လစဉ်ကြေး ၃၀၀၀၀ ကျပ်က စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ လကုန်အထိ ???အထူးဈေးနှုန်းတွေရှိတာမို့ ☎️09 977 160 671 ကို အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
*** MSME Books ဆိုတာ ☁️ ??Cloud Based Accounting Software တဈခုဖွဈပါတယျ။လုပျငနျးတဈခုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့?? ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ ရှငျးတမျးတှကေို လိုအပျတဲ့ အခြိနျမှာ အလှယျတကူ ကွညျ့ရှူ့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
MSME Books မှာလုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အရာမြားကတော့
?ကုနျပစ်စညျး အဝငျ၊အထှကျနှငျ့ လကျကနျြစာရငျး
?ငှသေား အဝငျ၊အထှကျနှငျ့ လကျကနျြစာရငျး
☁️ ??Cloud Based Accounting Software ဖွဈသညျ့ အတှကျ ⏱အခြိနျ၊✈️နရောမရှေးကွညျ့နိုငျခွငျး၊?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? သုံးစှဲသူဦးရကေနျ့သတျမထားခွငျး၊? ? ?ဆိုငျခှဲမြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
? ? ?ဆိုငျအလိုကျ ❓ကုနျပစ်စညျးလကျကနျြအရအေတှကျ ကွညျ့နိုငျပါသညျ။
?အတိုငျးအတာ၊အခြိနျအတှယျမတူသော(Multi UOM၊ယူနဈအမြိုးမြိုး) ပစ်စညျးမြားအားလညျး ဝယျယူသညျ့အခြိနျတှငျ ယူနဈတဈမြိုး၊ရောငျးသညျ့အခြိနျတှငျ ယူနဈတဈမြိုးအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။?ငှကွေေးစနဈအမြိုးမြိုးအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
အကွှေးရောငျးခသြညျ့ အခြိနျတှငျလညျး ?ငှကေောကျခံရမညျ့ရကျကို စိတျကွိုကျသတျမှတျနိုငျပါသညျ။
အရေးအကွီးဆုံးကတော့ သငျဘယျနရောကို ရောကျရောကျ လုပျငနျးရဲ့ အခွအေနကေို စာရငျးကိုငျဆီက အစီရငျခံစာ စောငျ့စရာမလိုပဲ၊ လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ ကွညျ့နိုငျတာမို့ အရမျးကို အဆငျပွပေါတယျ။
အသုံးပွုခ ???လစဥျကွေး ၃၀၀၀၀ ကပျြက စတငျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဇနျနဝါရီ လကုနျအထိ ???အထူးဈေးနှုနျးတှရှေိတာမို့ ☎️09 977 160 671 ကို အခုပဲဆကျသှယျလိုကျပါ။
Tagged Cloud Based Accounting Software
Next postHow to user Production Order